Ukukhathala kwemisipha kukuthinta kanjani ukusebenza? - Izimpendulo Ezihamba Phambili
Main > Izimpendulo Ezihamba Phambili > Waba yini umphumela wokukhathala kwemisipha ekhonweni lakho - umhlahlandlela wokugcina
Waba yini umphumela wokukhathala kwemisipha ekhonweni lakho - umhlahlandlela wokugcina
Ukukhathala kwemisipha kukuthinta kanjani ukusebenza?
Umsebenzi ojulile weimisiphakubangela ukwehla kwe-ukusebenza, waziwa ngoukukhathala… '(Allen & Westerblad, 2001). 'Ukwenza umsebenzi wezimoto isikhathi eside kudala imotoukukhathala, ngokuvamile okuchazwa njengokuwohloka kwekhono lomuntu lokusebenzisa amandla.
Lo mbhalo uhlola izifundo zokukhathala kwemisipha ngesikhathi esisodwa sokuqeqeshwa. Njengoba uzobona, ayikho inkambo eyodwa yokukhathala kwemisipha. Futhi, imbangela yokukhathala izocaciselwa umcimbi.
Ngamanye amagama, yini enomthelela ekukhathaleni uma uku? Ukuphindaphindwa komshini wokushicilela ebhentshini kuhluke kakhulu emlandweni wokukhathala osekugcineni kwemarathon. Okokuqala, ake sichaze ukuthi kusho ukuthini ukukhathala kwemisipha. Ukukhathala kwemisipha kuchazwa njengokwehluleka ukugcina amandla okusebenza noma ukusebenza okunikeziwe, okuholela ekwehliseni umsebenzi noma ukusebenza.
Nasi isibonelo sencwadi yokuqala ukukhathala kwemisipha. Usezigabeni zokuqala zokuqeqeshwa. Ukukhishwa kwamandla noma ukukhiqizwa kugcinwa kahle.Ukukhiqizwa kwamandla kuyehla, ngaleyo ndlela kufezekise incazelo yethu yokukhathala.
Ama-Physiologists abelokhu efunda izindlela zokukhathala kwemisipha iminyaka. Isihloko siyinkimbinkimbi ngokwedlulele futhi, njengoba sekushiwo, i Ukusetshenziswa kuyehluka kuya ngohlobo lokuvivinya umzimba. Zonke izinyathelo phakathi kwesinqumo ebuchosheni sokuhambisa imisipha kanye nokuncipha kokugcina kwemisipha yamathambo kuyizindawo ezingaba khona zokukhathala.
Ngokuvamile, noma kunjalo, izimbangela zokukhathala zisezindaweni ezisemaphethelweni, kuqala ngokuxhuma kwemisipha ye-neural nangaphezulu. Ngakho-ke ngizogxila kuphela kulezi zingxenye. Njengesikhumbuzo, uhlobo lwemicu yemisipha eqoqiwe idlala indima enkulu ekubangeleni ukukhathala.
Thayipha i-2 X-fibers ebuthwa ngesikhathi esifushane. Amathayi okuqeqesha amafushane, aqine ngokushesha. Ngenkathi imicu yohlobo 1, esetshenziswa phakathi nesikhathi eside, ukuqeqeshwa ngamandla aphansi, ikhathala kancane uma nje kukhona uphethiloli owanele wokukhiqiza i-ATP.
Okokuqala, ake sihlole izimbangela ezivame kakhulu zokukhathala lapho wenza umsebenzi wesikhashana, wokuqina okukhulu. Isibonelo, uma ucindezela isisindo esisindayo ebhentshini, ungahle ukwazi ukwenza ama-reps amahlanu, kepha awukwazi nje ukusunduza owesithupha uphume kumayadi angama-200, ngeke ukwazi ukugcina ijubane lakho phakathi kwama-20 wokugcina amagceke. Imvamisa imbangela yokukhathala ukukhathala noma ukunqwabelana kwezinto ezingaphansi noma ama-metabolites.
Ngenkathi izinto eziningi zingaba nomthelela ekuqaleni kokukhathala, ngizoxoxa ngezimbangela ezintathu ezivame kakhulu zokukhathala kwemisipha ngesikhathi sokuzivocavoca esifushane, sokuqina okukhulu. Lokhu kufaka ukwehla kwazo zombili i-ATP kanye nezitolo ze-creatine phosphate ezicutshini. Kanye nokuqoqwa kwama-hydrogen ions noma ukwanda kwe-acid acid.
Okokuqala, ukuncipha kwe-ATP ngenxa yokungafani phakathi kokusetshenziswa kwe-ATP nokukhiqiza kuholela ekukhathaleni. Njengesikhumbuzo, i-ATP iyadingeka ekuhambeni ngebhayisikili kuwo wonke amabhuloho nasekuthuthukiseni ukungezwani. Uma i-ATP isetshenziswa ngokushesha okukhulu kunalokho engenziwa, amazinga azokwehla ngaphansi kwamazinga okuphumula, lowo muntu kuzodingeka anciphise ukuqina kokuzivocavoca umzimba, okuzokwehlisa izinga lokusetshenziswa kwe-ATP ukuze umkhiqizo we-ATP uhambe ijubane, noma umuntu Isidingo sokuzivocavoca Okwesibili, izitolo ze-creatine phosphate zisetshenziswa ngokushesha ngesikhathi esifushane, sokuqeqeshwa ngamandla.
Njengoba i-creatine phosphate ingumthombo oyinhloko wamandla emisipha yokukhiqiza i-ATP, ukuncipha kwayo kuthinta ikhono lokugcina amazinga e-ATP. Lapha i-ATP ne-creatine phosphate ikhonjiswa kwimisipha ekuphenduleni ekusebenzeni okuphezulu. Qaphela ukuthi amazinga e-creatine phosphate, afushaniselwe i-PC ye-phosphocreatine, ehla ngokushesha okukhulu ngale ndlela.
Lapho amazinga ephansi kakhulu, kuthinta kabi amandla ethu okukhiqiza futhi ngaleyo ndlela kugcinwe amazinga e-ATP. Imisipha yehla kakhulu, okuholela ekukhatheni noma ekukhathaleni. Isizathu sesithathu esivamile sokukhathala kwemisipha ngesikhathi esifushane, ukuvivinya umzimba ngamandla ukwanda kwe-muscle acid noma ukwakhiwa kwama-ion e-hydrogen.
isihlalo esihamba ngebhayisikili
Le metosis acidosis ingaba nomthelela ekukhathaleni ngezindlela eziningi. Ukugxila kwe-hydrogen ions kungadlala indima ye-calcium ekwakheni amabhuloho awele futhi ngaleyo ndlela kwakheke imisipha. Njengoba uzokhumbula, i-anaerobic glycolysis ingumthombo omkhulu wokukhiqizwa kwe-ATP ngesikhathi esifushane, ukuqeqeshwa okunamandla ezitolo ze-creatine phosphate, kuhlangene nokwehliswa kokukhiqizwa kwe-ATP ngenxa ye-anaerobic glycolysis, kuholela ekuqaleni kokukhathala kwemisipha.
Njengoba kukhulunyiwe endatshaneni yezidakamizwa ezithuthukisa ukusebenza, lo ngumqondo lapho ukulayishwa kwe-buffer kungahle kuholele ekuthuthukeni kokusebenza kwemisipha ngesikhathi sokuvivinya ngamandla okukhulu. Ukukhulisa amandla okubhaxabula ngaphambi kokuzibandakanya kule misebenzi enamandla kuvumela ukungasebenzi kahle noma ukubuyisa imiphumela engemihle ehambisana ne-metabolic acidosis. Kuboniswe lapha yisibonelo esibonisa ukuthi abesifazane abaqeqeshiwe babelashelwa ukuzilolonga okuphelele ngaphambi kokuthatha i-sodium bicarbonate futhi bakwazi ukusebenza ngamandla aphakeme kakhulu nokuqina imizuzwana engama-60.
Uma kuqhathaniswa nokuthi benze isivivinyo esifanayo ngqo nge-placebo noma bengekho isengezo. Lesi ngesinye sezifundo eziningi eziphakamisa ukuthi i-metabolic acidosis iyisici esinomthelela ekukhathaleni ngesikhathi sokuvivinya umzimba ngamandla amancane - okuyizimbangela ezintathu ezivame kakhulu zokukhathala phakathi nokuvivinya umzimba okuhlala isikhathi eside. Njengoba ngishilo ekuqaleni, ukuncipha kwe-carbohydrate kuyimbangela ejwayelekile yokukhathala phakathi nalolu hlobo lokuzivocavoca.
Futhi, ngokuhamba kwesikhathi, ukwehla kwamazinga we-calcium yemisipha kungaba nomthelela ekukhathaleni. Ekugcineni, ukwakheka kokushisa noma ukwanda kokushisa komzimba kanye nemisipha kuyinto engaba namandla ekukhuleni kokukhathala. Ukubamba iqhaza emicimbini yebanga efana ne-marathon kungukuqina okuncane noma okulingene kokuqeqeshwa okungabekezelelwa noma kugcinwe isikhathi eside.
Ukuwohloka kwemisipha ye-glycogen kuvame ukuqondana nokukhathala okungagcwaliseki njengoba umthombo oyinhloko we-ATP wokukhiqiza ungasekho. Ngenxa yalokhu, inqubo yokulayisha kwe-carbohydrate, eyaziwa ukwandisa izitolo zemisipha ye-glycogen ngaphambi komncintiswano, ingathuthukisa ukusebenza. Lapho i-muscle glycogen isetshenzisiwe, lowo muntu unezinketho ezimbili.
Nciphisa ukuqina koqeqesho futhi ngaleyo ndlela ijubane lokusetshenziswa kwe-ATP noma ukuphela koqeqesho. Zombili lezi zimo zifanelana nencazelo yethu yokukhathala kwemisipha. Ngaphezu kwalokho, ukuncipha kwesibindi glycogen ekugcineni kuholela ekwehleni okuncane kwamazinga kashukela egazini noma i-hypoglycemia.
Njengoba imisipha nobuchopho kuncike kushukela wegazi ukuthola uphethiloli, ikhono lokuqhubeka nokuzivocavoca alilondolozi uma kufinyelelwe i-hypoglycemia. Ngalesi sizathu, futhi, ukusetshenziswa kweziphuzo ezihlanjululwe ze-carbohydrate ngesikhathi semicimbi yebanga kungaholela ekwandeni kokusebenza. Ngamahora wokuzivocavoca, i-cytoplasmic reticulum emangqamuzaneni emisipha ingavuselelwa kaninginingi ukukhipha i-calcium ukuze yakhe amabhuloho anqamulelayo, futhi ngokuhamba kwesikhathi, enye yekhalsiyamu ekhishwe ingavuza uketshezi olungaphandle kwamangqamuzana kanye / noma ingamuncwa yi-mitochondria.
Lokhu kungasho ukuthi i-calcium engaphansi iyatholakala ngokusikwa kwemisipha ngakho-ke amandla noma ukuphuma kwamandla kukhubazekile futhi ukushisa kwemisipha kungaholela ekukhathaleni. Ngokuzivocavoca umzimba isikhathi eside, la mazinga okushisa angafinyelela ku-42 degrees Celsius noma ku-108 degrees Fahrenheit. Lokhu kubangela ukuthi amaphesenti amakhulu egazi lakho aqondiswe kabusha esikhunjeni ukuze kusetshenziswe i-thermoregulation.
Lokhu kusho ukuthi igazi elincane ligeleza liye emisipheni yezithako ezisebenzayo. Ngaphezu kwalokho, ukungangenisi amanzi ngokwanele kuholela ekwehleni kwevolumu ye-plasma, eyehlisa ukukhishwa kwenhliziyo yakho nokunikezwa kwegazi emisipheni. Ngokufingqa, ukukhathala kwemisipha kuchazwa njengokuhluleka ukugcina izinga elithile lokuqina kokuvivinya umzimba noma ukuphuma kwamandla kuholela ekwehleni komsebenzi noma ekukhiqizeni.
Umbono ovame kakhulu wokukhathala ngesikhathi sokuzivocavoca usemisipheni uqobo. Izimbangela zokukhathala ziqondene nomsebenzi futhi zingabangelwa ukukhathala noma ukunqwabelana kokuguqukayo okubalulekile. Ekugcineni, izimbangela zokukhathala emicimbini emaphakathi njengokugijima okungu-10k kungenzeka kube yizici ezikhulunywe ngazo zombili zesikhashana, ukuqeqeshwa ngamandla kanye nesikhathi eside, ukuqeqeshwa ngamandla aphansi.
Kwenzekani ekukhatheni kwemisipha?
Ukukhathala kwemisiphaichazwa njengokwehla kwamandla amakhulu noma ukukhiqizwa kwamandla ekuphenduleni umsebenzi wenkontileka. Ingavela emazingeni ehlukene endlela yemoto futhi imvamisa ihlukaniswa yaba izingxenye eziphakathi neziphathelene nomngcele. Umngceleukukhathalaikhiqizwa ngoshintsho noma kude kude nokuhlangana kwe-neuromuscular.Okthoba 6 2017
Yini ebangela ukukhathala kwemisipha?
Yini ebangela ukukhathala kwemisipha? Yabelana ngomdlavuza wePinterest, isifo sohlangothi, kanye ne-rhabdomyolysis konke kungakhiqizaukukhathala kwemisipha. Umsebenzi onzima nokuguga kuyizinto ezimbiliizimbangelakaukukhathala kwemisipha. Kepha izimo eziningana zempilo nazo zingakhiqizaukukhathala kwemisipha.Septhemba 11 2019
Uyini umphumela wokukhathala kuphethini ye-EMG?
KuhleloEMGisiginali,ukukhathalangokuthembekile kukhiqiza ukwehla kwemvamisa eshiwo (IBigland-Ritchie et al., 1981; UMerletti et al., 1991) kepha kunokuhlukaumphumelangobukhulu ngokuya ngezici eziningi kufaka phakathi imisipha ethile ethintekayo nezinga lokuncipha (Gerdle et al., 2000).Juni 21. 2018 Nov.
Ngakho-ke ake senze ukuhlolwa kwethu kokuqala ngizokwenyusa i-voltage lapha ibe cishe yi-0.5 futhi ngidinga ukukhuthaza futhi asiboni noma yimuphi amandla akhiqizwa yimisipha. Ngizokuletha ku-1 futhi manje sibona amandla amancane kakhulu we-0.15 gram ngizokwandisa i-voltage ngo-1 njalo futhi ngibona ukuthi amandla esizukulwaneni samandla manje enyuka aya kuma-volts ama-3 futhi futhi ayanda, futhi lesi yisizathu esihle kakhulu sokuthi kungani lokhu kwenzeka ngakho ake siye ku-5 futhi sisabona ukwanda okuhle kakhulu kwamandla akhiqiziwe.
Asiye ku-6 ngikhuphukele ku-7man sikhuphukele ku-8 futhi ungakhumbula lapho saqala khona ukubona izinguquko ezincane nezincane ngakho lapha sinephuzu lesishiyagalombili elilodwa futhi ungakhumbula phakathi kuka-8 no-9 kwaba noshintsho oluncane kakhulu, kepha ngizobona uma kukhona ushintsho, ngakho-ke ake sisuke kwelinye iphuzu eziyisishiyagalombili igremu elilodwa siye kwelinye iphuzu ayisishiyagalombili amabili ngakho-ke kukhona ushintsho oluncane kakhulu, ngakho-ke sisondela kakhulu phezulu phezulu kwesikhuthazo esiphezulu lapha, ngakho-ke akehlise size sifike kwabayisishiyagalolunye bese sibona ukuthi sisaluthola yini ushintsho futhi manje asinalo ushintsho ngakho-ke ake silubuyise lube ngamaphuzu ayisishiyagalombili futhi lokho kuyisikhuthazo sethu esiphezulu futhi sizokhuluma ngokuthi kungani sibona imiphumela esiyibonayo futhi ake siqale izivivinyo zethu ezilandelayo lapha ukuze uthole ukuthi nginamandla amakhulu wokuvuselela lapha asethwe ngamaphuzu ayisishiyagalombili futhi yingakho sizovusa lesi sicubu futhi uma sibona noma yiluphi uhlobo lokukhuphuka kwamandla ngenkathi sivuselela lesi sicubu sizokwazi ukuthi akubangelwa ukushintsha kwengxabano kepha kube ngu-somethi Ngakolunye uhlangothi, lokho kudala ushintsho ngakho-ke masiqhubeke futhi silushukumise kanye bese sikuvumela lokho kwehlele esisekelweni bese sikhuthaza futhi futhi uzothola ukuthi imisipha idale amandla athe xaxa, ngizosula lokho kuxosha futhi manje sengizovuselela imisipha bese ngizomvuselela kabusha ngokushesha okukhulu ngaphambi kokuthi aphumule ngokuphelele futhi ake sibone ukuthi kwenzekani ukuze umbone ekhiqiza okungaphezulu. Kithina kulungile, ngakho-ke lokhu kuxosha kuyasulwa futhi masikwenze lokhu izikhathi ezine zilandelana, njalo lapho imisipha ikwazi ukukhiqiza amandla athe xaxa. Ake sixoxe ngokuthi kungani lokhu kwenzeka, ngakho-ke ukuzama kwethu okulandelayo kuzohluka kancane.Sesibeke umshini umshini wokuvuselela amandla kagesi ukuze sikwazi ukuletha ngokushesha izinto eziningi ukuze sikwazi ukushintsha ukuthi zingaki izicubu zomzimba ezikhona lapha ngomzuzwana futhi kusethwe kwaba ngu-50 futhi ukungezwani kusethwe kumaphuzu ayisishiyagalombili okuyisiyaluyalu esiphezulu ngakho-ke sizoqhubeka futhi sikhuthaze le misipha izikhathi ezingama-50 ngomzuzwana futhi sibona lesi sivumelwano sinyakazisa la magagasi lapha sibona amandla amandla aqala ukwehla manje ngizoqhubeka ngime bese sizokhuluma ngakho, ukuzama kwethu kokugcina kwanamuhla kulungile 'Sizokwengeza isikhuthazo cishe ku-130 ngomzuzwana bese sibona ukuthi kwenzekani , hmm, asiyiboni nhlobo ifomu le-wave ne-twitch yemisipha futhi sibona ukwehla okusheshayo kwe-forceokay lapha ake sixoxe ngalokho esikubonile lapha
Unqoba kanjani ukukhathala kwemisipha?
Ukuphumula / Ukubuyisela esimweni - Gcwalisa ukufudumala nokupholisa phansi imizuzu engu-5 kuye kwengu-10 njalo uma uzivocavoca umzimba. Qala kancane futhi kancane kancane wandise amazinga wokuqina wokuzivocavoca ukuze i-imisiphaziphonswa inselelo kancane kancane futhi zingakha ngokuhamba kwesikhathi. Vumela ukuphumula okwanele phakathi kwezikhathi zokuzivocavoca nokuphindaphinda kwamandla.Ephreli 16 2012
Unqanda kanjani ukukhathala kwemisipha?
Hydration - Ukuphuza amanzi usuku lonke nokuphuza iziphuzo zemidlalo ngesikhathi sokuzivocavoca kubalulekile kuukuvimbelaukoma, ukulahleka kwe-electrolyte, kanyeukukhathala kwemisipha. Kunconywa ukuthi uphuze izingilazi zamanzi ayi-10-12 8-oz nsuku zonke.Ephreli 16 2012
Ukulungisa kanjani ukukhathala kwemisipha?
Qiniseka ukuthi welula ngaphambi nangemva komsebenzi onzima. Ukuzifudumeza kungakukhululaimisiphafuthi uvikele ekulimaleni. Uma ngabeukukhathala kwemisiphakuyaqhubeka, ukwelashwa okushisayo nokubandayo ngamasu anganciphisa ukuvuvukala nokungahambi kahle. Amanye amacala weukukhathala kwemisiphakungadinga usizo lwezokwelapha.Ephreli 11 2018
Ukuphatha kanjani ukukhathala kwemisipha?
Uma ngabeukukhathala kwemisiphakuyaqhubeka, ukwelashwa okushisayo nokubandayo ngamasu anganciphisa ukuvuvukala nokungahambi kahle. Amanye amacala weukukhathala kwemisiphakungadinga usizo lwezokwelapha. Ngokuya ngokuxilongwa kwakho, udokotela wakho angakuhlinzeka ngemithi elwa nokuvuvukala noma ye-anti-depressant.Ephreli 11 2018
Ukukhathala kubuthinta kanjani ubudlelwano be-EMG kanye namandla emisipha?
Ebukhoneni be-ukukhathala kwemisipha, noma kunjalo, izinguquko kuzakhiwo zeumsiphaamandla wesenzo se-fiber kanye ne-motor unit twitchamabuthoingashintsha i-ubuhlobophakathi kobusoEMGamplitude futhiamandla. Ngokuvamile, ebusweniEMGukuphakama kwe-amplitudeamandla emisiphaniniukukhathalawayekhona.Juni 13. 2010 r.
Imaphi amavithamini asiza ukukhathala kwemisipha?
UvithaminiD kubalulekile ku-imisiphaukusebenza ngokujwayelekile. Ngokwesifundo, aUvithaminiUkushoda kuka-D kuholela ekwandeniubuthakathakafuthi kuncishisiweumsiphaisisindo. Futhi kukubeka engcupheni yokuwa.UvithaminiD ingasetshenziswaUsizoiziguli eziphethweumsiphaubuhlungu nomaubuthakathaka.
Kusho ukuthini lapho imisipha yakho ikhathele?
Lokhu kungachazwa njengokukhathala kwemisipha. Ukukhathala kwemisipha kuyisibonakaliso esinciphisa amandla emisipha yakho yokwenza ngokuhamba kwesikhathi. Ingahlotshaniswa nesimo sokukhathala, imvamisa kulandela umsebenzi onzima noma ukuzivocavoca umzimba.
Iyini imiphumela yokukhathala emzimbeni?
Inhloso yalokhu kubuyekezwa bekungukugxila kumthelela wokukhathala ekusebenzeni kwemisipha, ekunikezeni amandla, nasemisebenzini yokuqonda kanye nokufingqa imiphumela ukuqonda ithonya lokukhathala kule misebenzi.
Kwenzekani kuma-neurons emisipha ngesikhathi sokukhathala kwemisipha?
Njengoba ukukhathala kuqhubeka, i-1) izinga lokudubula lamaconsi emoto lehla, okubuye kwehle inani lezinto ezingahle zenze imisipha uqobo bese iba nomlilo, okuholele ekwehliseni amandla, kanye no-2) imisipha nayo ingaqhubeka ikhiqize amandla esenzo ngenxa ye-neural drive, kepha imisipha ayikwazi ukuvumelana ngenxa